UGeorgy Zhukov Biography
Wazalelwa ngoDisemba 1, 1896, eStrelkovka, eRussia, uGeorgy Zhukov wayengunyana wabalimi. Emva kokusebenza emasimini njengomntwana, uZhukov wafundiswa kwintambo yaseMoscow eneminyaka eyi-12. Ukugqiba kwakhe ukufunda iminyaka emine kamva ngo-1912, uZhukov wangena kwi shishini. Uhambo lwakhe lwaluhlala lufutshane nje ngoJulayi 1915, wabhalwa emkhosini waseRashiya ukwenzela ukukhonza kwiMfazwe Yehlabathi I. Wabelwa kumahhashi, uZhukov wenza ngokuhlukileyo, ngokuphumelela kabini uMnqamlezo weSt.
George. Ukukhonza kunye ne-106th Reserve Cavalry kunye ne-10 ye-Dragoon Novgorod Ijonge, ixesha lakhe kwimpikiswano iphelile emva kokulimala kabi.
Emva ko-Oktobha ngo-Oktobha ngo-1917, uZhukov waba ilungu leQumrhu laseBolshevik waza wajoyina i-Red Army. Ukulwa kwiMfazwe YaseRussia (1918-1921), uZhukov waqhubeka emabhashini, ekhonza kunye ne-1st Cavalry Army eyaziwayo. Ekugqibeleni kwemfazwe, wanikezelwa iSigqibo seBlack Banner ngendima yakhe ekunciphiseni i-1921 iTambov Rebellion. Ukukhula ngokukhawuleza kwiinqanaba, uZhukov wanikezwa umyalelo wecandelo lokulwa namahhashi ngowe-1933, kwaye kamva wabizwa njengomphathi womphathi weSithili seMpi saseByelorussian.
Ixesha kwiMpuma Ekude
Ukuphumelela ngokuphumelelayo ngoJoseph Stalin "oPhezulu Omkhulu" we-Red Army (1937-1939), u-Zhukov wakhethwa ukuyalela i-First Soviet Mongolian Army Group ngowe-1938. Ebenziwa ngokuyeka ubudlova baseYapan kunye nomda waseMongolia-iMancihuriya, uZhukov wafika emva kolawulo lukaSoviet kwiMfazwe yaseLake Khasan.
Ngomhla ka-Meyi 1939, imfazwe yaqhubeka phakathi kwamaSoviet kunye namaJapan. Ngamaqabunga omabini ehlobo, wagxininisa emuva nangaphandle, ngaphandle kokufumana inzuzo. Ngomhla ka-Agasti 20, uZhukov waqalisa ukuhlaselwa okukhulu, ukuphosa amaJapane ngelixa iikholomu zokhuselo zazizulazula.
Emva kokujikeleza iCandelo lama-23, uZhukov wawabhubhisa, ngelixa ephoqelela aseYapan emngceleni.
Njengoko uStalin wayecwangcise ukuhlasela kwePoland, iphulo eMongolia laphela kwaye isivumelwano sokuthula sasayinwa ngoSeptemba 15. Ngenxa yobunkokeli bakhe, uZhukov wenziwa iHero yeSoviet Union. Ukubuyela ngasentshonalanga, wakhuthazwa ngokubanzi waza wenza iNkulumbuso yabasebenzi abakhulu be-Army Army ngoJanuwari 1941. NgoJuni 22, 1941, i-Soviet Union yahlaselwa yiJamani laseJamani evula iMpi yaseMpuma yeMfazwe Yehlabathi II .
Njengoko amabutho aseSoviet ahlaselwa kwiindawo zonke, uZhukov wayephoqelelwe ukuba asayine i- Directive of Peoples 'Commissariat of Defense No. 3 eyayifuna uchungechunge lweentambo zokulwa. Ukuphikisana nezicwangciso ezibekwe ngulo myalelo, waboniswa ngokuchanekileyo xa behluleka ukulahleka. Ngomhla wama-29 kaJulayi, uZhukov watyathwa njengeNtloko yabasebenzi jikelele emva kokuncoma kuStalin ukuba i-Kiev ilahlwe. UStalin wenqaba kwaye ngaphezu kwama-600,000 amadoda athunjwa emva kokuba isixeko sasijikelezwe ngamaJamani. Ngo-Oktobha, uZhukov wanikwa umyalelo wemikhosi yaseSoviet evikela uMoscow , ukukhulula uGeneral Semyon Timoshenko.
Ukunceda ekuzikhuseleni kweso sixeko, uZhukov ukhumbula ama-Soviet aseMpumalanga Ekude kwaye wabulala i-logistics ebonakalayo ngokukhawuleza ekudluliseni kuwo lonke ilizwe.
Ukuqinisekiswa, uZhukov waluvikela loo mzi ngaphambi kokuba aqalise ukulwa nokulwa noDisemba 5, owamisa amaJamani amawaka angama-60-150 ukusuka kwisixeko. Xa isixeko sagcinwe, uZhukov wenziwa njengomphathi-mthetheli-mkhulu waza wathumela kumzantsi western-front ukuba athathe uxanduva lokukhusela iStalingrad . Ngoxa iimbutho zeso sixeko, zikhokelwa nguGenerali Vasiliy Chuikov, zalwa namaJamani, iZhukov kunye no-General Aleksandr Vasilevsky baceba u-Operation Uranus.
Ulwaphulo olukhulu, i-Uranus yenzelwe ukumboza kwaye ijikeleze i-Army 6th Army eStalingrad. Eqalwe ngoNovemba 19, isicwangciso sasebenza njengamaSoviet ahlasela emntla nasenzantsi kweso sixeko. NgoFebruwari 2, imikhosi yaseJamani yajikeleza yagqitywa. Njengoko imisebenzi yaseStalingrad yayiphetha, uZhukov wayejongene nokuSebenza kwe-Spark evule indlela eya kwisixeko esiqhotyoshelwe eLeningrad ngoJanuwari 1943.
Ngehlotyana, uZhukov waqhagamshelana ne-STAVKA (Abasebenzi bonke) kwisicwangciso se-Kursk.
Emva kokuqiqa ngokuqinisekileyo iinjongo zesiJamani, uZhukov wacebisa ukuba athathe isigxina sokuzimela nokuvumela i-Wehrmacht ukuba iphele. Ezi ngcebiso zamukelwa kwaye i-Kursk yaba yinto ebalulekileyo yokunqoba kweSoviet yemfazwe. Ukubuyela kumntla wangasenyakatho, uZhukov waphakamisa ngokupheleleyo ukuvinjelwa kweLeningrad ngoJanuwari 1944, ngaphambi kokucwangcisa i-Operation Bagration. Eyilwe ukucima i-Belarus kunye nePertugal empuma, i-Bagration yaqaliswa ngo-Juni 22, 1944. Inkolelo ye-Zhukov yayinyanzeliswa ukuba ihambe xa ilayini yabo yokuthengiswa yanda kakhulu.
Ukuhamba phambili kweSoviet eJamani, amadoda akwaZhukov awanqoba amaJamani e-Oder-Neisse kunye ne- Seelow Heights ngaphambi kokuba ajikeleze iBerlin. Emva kokulwa ukuthabatha umzi , uZhukov wayejongene nokusayinwa kwesinye sezixhobo zokuSondeza eBerlin ngo-Meyi 8, 1945. Ekuqapheliseni iimpumelelo zakhe ngexesha lemfazwe, uZhukov wanikwa inhlonipho yokuhlola i-Victory Parade eMoscow ngoJuni.
Ukulandela imfazwe, uZhukov wenziwa ngumphathi wamasosha waseSoviet Occupation Zone eJamani. Wahlala kule ndawo engaphantsi konyaka, njengoko uStalin, evakalelwa yingozi ngenxa yokuthandwa nguZhukov, wamsusa waza kamva wamnika kwi-Odessa Military District. Ngokufa kukaStal ngo-1953, uZhukov wabuya wamnceda waza waba ngumphathiswa we-ntetho yezokukhusela kunye nomphathiswa kamva wokhuselo. Nangona okokuqala wayengumxhasi kaNikita Khrushchev, uZhukov wasuswa ebulungiseleli bakhe kunye neKomiti ePhambili ngoJuni 1957, emva kokubambisana nomgaqo-mkhosi.
Nangona wayethandwa nguLeonid Brezhnev noAleksei Kosygin, uZhukov akazange anikwe enye indima kurhulumente. Intando yabantu baseRussia, uZhukov wafa ngoJuni 18, 1974.
Imfazwe yaseMerika: iMagosa Jikelele uJoseph Wheeler
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe Yokuqala Ypres
Ngaba uMary Todd Lincoln wayegula ngengqondo?